Kutshanje, NCPCVET waphumelela isatifikethi elitsha ichiza le-iklasi yesibini drugs- lwezilwanyana omtsha kazwelonke "Gamithromycin" yaye "inaliti Gamithromycin."
Gamithromycin kuyinto inoveli semi-zokwenziwa macrolide olwa nawo. Okwangoku, tylosin kunye tilmicosin zisetyenziswa ngokubanzi nje macrolides. La machiza asetyenziswa ukuthintela okanye ukunyanga izifo zemiphunga ezinkomeni neehagu. Zidla abondliwayo kunye nentlaka okanye amanzi okusela. Umphumo nokuthintela okanye unyango kufuna iintsuku ezininzi yolawulo ngokuphindaphindiweyo. Nangona ekufezile iziphumo ezihle, kodwa ukwandiswa ukusetyenziswa kwexesha, kuye kwaba ezingafani yokunganyangeki ngamachiza kwiindawo ezininzi, kunye nokwanda umlinganiselo unyango kancane kancane.
Inaliti ye gamithromycin oluphuhliswe NCPCVET i kulungiselelwa eyenziwe ngokuxuba, prefiltering, ukuhluza engenazintsholongwane, kunye ukugcwaliswa aseptic. It has iingenelo zilandelayo: Okokuqala, idosi enye ye-ziphene / dystrophy inaliti Intramuscular ongama, inaliti linye ukusombulula le ngxaki. Le sesibini kuphela kusetyenziswa ukukhusela iinkomo izifo zemiphunga, kodwa ifuthe ngqo izifo zemiphunga ezihagwini. Eyesithathu ukusebenza ixesha elide enamandla, akukho ziziphumo ebezingalindelekanga, ukusebenza yomelele ngaphezu tylosin, tilmicosin kunye nezinye iziyobisi macrolide kabanzi. Kweyesine ke iingenelo spectrum ezibanzi antibacterial, umsebenzi onamandla antibacterial, ukufakwa ngokukhawuleza, bioavailability omkhulu, namasalela phantsi, ukhuseleko kunye kahle eliphezulu.
Isicelo ngempumelelo kwale mveliso kuya kunceda ukwandisa isakhiwo mveliso yeemveliso iziyobisi lwezilwanyana eTshayina, ngakumbi ukuhlangabezana nemfuno kwemarike, kunye nokwandisa imarike ukhuphiswano amachiza hambo lwezilwanyana.